Fanamarihana an-tserasera - pejy 5 11 - Ny Diabe Eran-tany
Sarin'olombelona amin'ny tsy fandeferana ao El Casar
5 Oktobra, 2019 4 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Tamin'ity volana oktobra 2 tamin'ny 2019 ity, tamin'ny vanimpotoan'ny Andro iraisam-pirenena tsy fahatoniana sy ny fanombohana ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana, dia nisy ny hetsika samihafa nokarakaraina tao El Casar. Tao amin'ny ambaratonga andrim-panjakana dia niresaka momba ny Manifesto tamin'ny Martsa 2 ny Ramatoa María José Valle Sagra, Ben'ny tanànan'i El Casar.
Ny fandefasana boky amin'ny sary an-tsary ao Bilbao
4 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Saure Publishing House dia nikarakara ny fihaonana "Operation bookcrossing comics" ao an-tanànan'i Bilbao. Ny boky natolotra "Indray mandeha" dia namboarina mba hahafahan'ny ankizy fitaovana manana alalàn'ny herisetra miaina tsy ahafantarana anarana. Tantara 5 an'ny ankizy manana
Manomboka amin'ny Km0 ny World March
10 Oktobra, 2019 3 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Madrid, 2 tamin'ny Oktobra of 2019, Andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Mpanao dia zato, avy any amina kontinanta hafa, nivory tao amin'ny Km 0 an'ny Puerta del Sol any Madrid ho tandindon'ny fanombohana ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana. Nahatadidy izy ireo fa 10 taona lasa izay dia mitovy
Sokajy Fampandrenesana, Tsindrio ny Notes
Ny munisipalin'i Luino dia miditra amin'ny TPAN
1 Oktobra, 2019 1 Oktobra, 2019 ny Antonio Gancedo
Nanaiky ny hetsik'i Alessandra Miglio ny filankevitry ny tanànan'i Luino amin'ny fifanarahana UN momba ny lalàna mandrara ny fampiasana fitaovam-piadiana niokleary, (TPAN). Tsy mbola nanao sonia ny Fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary i Italiana, nankatoavina tamin'ny Jolay 2017 tamin'ny jeneraly ankapobeny tamin'ny Jolay XNUMX
Sokajy Gazety ho an'ny gazety, Tsindrio ny Notes
Fambolena Hiroshima Ginkgo Biloba
Ny 28 tamin'ny volana septambra ny 2019, dia nanatanteraka ny fambolena Ginkgo Biloba de Hiroshima (nomen'ny Fikambanana "Tropika Utopia" an'i Comerio). Ilay toerana tena fambolena eny amin'ny tanimbary any Venegono Superiore, làlana Via delle missioni, 12 - Valan-javaboarin'ny Misionera Comboni. Ireo zavatra mifandraika dia natao
Fetin'ny fandriam-pahalemana ao amin'ny sehatra EVA
3 Oktobra, 2019 Septambra 29, 2019 ny Antonio Gancedo
Ny orkestra an'ny ankizy koa dia nanentana ny andro iray izay nitaky ny fangatahana sy ny fitakian'ny vondrona vehivavy, ny tanora manohitra ny fiakaran'ny hafanana sy ny fitokonana manohitra ny fiovan'ny toetr'andro. Samy nizara toerana sy hafanam-po daholo izy ireo nandritra ny tontolo andro, ary koa ny sakafo sy ny resaka tamin'ny fiatoana antoandro. Mijoroa
Costa Rica dia manambara ny fandriampahalemana
Septambra 29, 2019 Septambra 29, 2019 ny Giovanni White
Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana, ny ekipa mpanentana amin'ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana any Costa Rica dia nikarakara ity fivoriana Intercultural ity. Namboarina tao amin'ny Central Park renivohitra Costa Rican, hankalaza ihany koa amin'ny mozika, kilalao, fisaintsainana, hafatra tsara sy tolo-kevitra ho an'ny fanovana
Manambara ao amin'ny Casar ny World March
Septambra 28, 2019 Septambra 28, 2019 ny Antonio Gancedo
Tamin'ny Aogositra 30, ny Filankevitry ny tanànan'i El Casar dia nanaiky tamim-pomba ny hetsika hiaraka amin'ny 2 World martsa. Anisany tafiditra ao anatin'izany fampidirana io dia nandray anjara tamin'ny fampiroboroboana sy fanamorana ny fampandehanana ny 2 World martsa io. Izy ireo dia mandray anjara amin'ny fanolorana ny hetsika ary ny fanazavana ny Bokin'i Môrmôna
17ª Alin'ny autographs ao Londrina
Septambra 28, 2019 ny Antonio Gancedo
Tao amin'ny sekoly 31, olona 282 dia nanetsika namoaka tantara, lahatsoratra ary sary izay maneho ny eritreritry ny mpianatra, mpampianatra, filoham-pirenena sy ray aman-dreny momba ny fandriampahalemana, herisetra ary tsy fahatoniana, fanabeazana ho kolontsaina fandriampahalemana ao amin'ny tontolo sekoly. sy ny fiainana iraisan'ny tsirairay avy amintsika. Ireo lahatsoratra
Ny World March dia atolotra ao Carapicuiba
← Previous 1 ... 4 5 6 ... 11 Next →
Fanamarihana momba ny martsa any Chili
March-Border March and the World March
Ny fidirana ao Afrika amin'ny World World
Diabe manerantany amin'ny parlemanta italiana
Fanombohana ny volana martsa sy tsy herisetra amin'ny sekoly
Londrina dia mifandray amin'ny World World